Plastic Bamboo ne China ekisipota nokuda Swimming Pool Decoration
Dia: 20mm, 40mm, 60mm, 80mm uye 100mm
Length: 1000mm kana sezvo paminiti chikumbiro mutengi wacho
Mavara: Green, Yellow, Fodya kana customized
Vamwe Mazano yemudzimu chakagadzirwa yemishenjere dzinotevedzana:
1. Product Description nokuda Plastic sengere:
Bamboo tsotso anonziwo matanda sengere. Emulated sengere upenyu refu span, vakasununguka kubva nazvo, hapana ngura, hapana kuora uye anotarisa kwezvokufuka. Saka havana kugamuchirwa nokuda vatengi. Vaigona kuva zvakakwana kushandiswa dzinopisa-music musha kuvandudza chirongwa kana mubindu panze kana paki kushongedzwa. Vachava zvikuru-chinja uye kunogona kushandiswa mune zvose dzinogarwa uye zvivako zvebhizimisi kushongedzwa.
2. Zvinoumba Plastic sengere:
Diameters: Kazhinji pane 20mm, 40mm, 60mm, 80mm uye 100mm
No makatsemuka, UV uchapupu, ngura nemishonga
3. Accessories pamusoro Plastic sengere:
4. Kushandiswa Plastic sengere:
Nokuti fenzi, arbors, uye trellises zviri pachivanze yako, musha, hofisi, kana zvimwe kufarira nzvimbo; kana mamwe nzvimbo yevedza gwapa, mumapaki, dzinochengetwa mhuka, chivaraidzo mumapaki, plesieroorde, vacational musha, chevarwere tsika musha, hotels, dzimba, pamhenderekedzo, pool, yokufaranuka Supermarket, grilli nemizariro, purazi, bindu uye dzimwe nzvimbo.
Rinogona kushandiswa mvura Mumagazini madziva.
5. Delivery, Shipping, Incoterms, Payment mashoko uye Sample wokuti Plastic sengere:
1) Delivery: Mazuva 10-30 pashure agamuchira muripo. Kunobva uwandu. Custom zvinhu zvaizoitika nguva refu.
2) ainge atumirwa nokuda rekutakura kana gungwa mitoro.
6. Company kwakaita okusuma Plastic sengere:
Previous: Nyepera Plastic Bamboo noruvara nokuda Wall Kufukidza
Next: Chakaita zvokugadzirwa Bamboo Fence nokuda Indoor Home Screening Decoration
Chakagadzirwa nyepera sengere matanda kuti hove Matangi aqua ...
Various Zvigwenzi Designs ose Fake Bamboo Sticks fo ...
Stainless simbi yemishenjere Tubing yebasa paki add ...
Chakagadzirwa nyepera yemishenjere kushongedzwa dzakanzi kutengeswa
OEM chakagadzirwa Bamboo pamwe Your Design Mifananidzo
Plastic Fence Posts Products nokuda chakaita zvokugadzirwa mai ...